America inoti zuva rekuratidzira kusafarira zvirango rave kucherechedzwa neSADC mushure mekusundwa neZimbabwe kupedzera hook padehwe retsindi.
SADC yakaita chisungo chekuti musi wa 25 Gumiguru wega wega, rinenge riri zuva rekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Vachitaura neStudio 7 nezvezuva reZimbabwe neSADC rekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe, mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols vati Zimbabwe ingadai yashandisa nguva iyi kuvandudza hupfumi hwenyika pamwe nekusimudzira hupenyu hwevanhu.
VaNichols vanoti kuratidzira uku inzira yekuda kuvharidzira zvikonzero chaizvo zvaita kuti Zimbabwe ive mumatope mairi.
Varambawo kuti zvirango izvi zviri kukanganisa hupenyu hweveruzhinji vachiti zvirango zvavakaisa zvinobata chete avo vanotyora kodzero dzeveruzhinji pamwe nevanoita zvehuori.
VaNichols vatiwo rubatsiro rwuri kupihwa Zimbabwe neAmerica rwunoburitsa pachena kuti nyika yavo ine shungu nechido chekuona budiriro yeZimbabwe. Vati hurumende yeZimbabwe ikaita hutongi hwejekerere, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekubvisa huori, nyika ino inobudirira.
Murwiri wekodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano re Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, varambawo kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZanu PF ndizvo zvauraya nyika. VaMavhinga vakati kuvepo kwezuva iri hakuna zvakunobatsira vakati chakakosha kuzadzikisa zvakatarwa kuti zvirango izvi zvibviswe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika, weCrisis in Zimbabwe Coalition VaMarvelous Khumalo vati chitsvambe chiri kuhurumende kuti iremekedze kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko ari munyika.
Asi vari kutungamirira chikwata che Broad Alliance Against Sanctions avo vakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna Kurume 2019 vachiti vanoda kuti nyika iyi ibvise zvirango izvi, VaCalvern Chitsunge vati zvirango izvi ndizvo zvauraya nyika .
VaChitsunge vatiwo vanokatyamadzwa neAmerica kuti ingataure zvekodzero vachipomera nyika iyi mhosva yekuve nhungamiri mukusaremekedza kodzero pasi rese.
America yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Parizvino vannhu vanosvika makumi masere nevashanu chete uye makambani anodyidzana nevanhu ava anosvika makumi mashanu nemana. European Union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002.
Akapedzisira kuiswa pazvirango neAmerica ndimuzvinabhizimisi VaKuda Tagwirei vanodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe uye gurukua revasori VaOwen Ncube.
Mabhanga maviri anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe neAgricultural Development Bank akabviswa pazvirango gore rino.
Kunyangwe America neEuropena Union dziri kuti zvirango zvine chekuita nekodzero dzevanhu, Zimbabwe inoti zvakakonzerwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.
Asi vakawanda vanoti nyaya yehuori ndiyo yapa kuti Zimbabwe iende kumawere. Nyika inonzi inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore nekuda kwehuori.